About Us - Shijiazhuang Pengtong Imp & EXP Co., Ltd.
Cotton & spandex lamba
Home lamba lamba
Fanaovana am-paosy & milahatra lamba
Polyester lamba nylon
TR fitoriana lamba
Kofehy mena mangatrakatraka ny lamba
Shijiazhuang PengTong Imp. & EXP. Co., Ltd. ---- dia feno avy any ivelany mamokatra & varotra orinasa. Ny orinasa lainga in Shijiazhuang ny Hebei-pirenena lamba fototra, izay iray amin'ireo lehibe indrindra ao Shina damba faladiany. Misy milina fanenomana 400 sy mitohy Fandokoana & pirinty milina ao amin'ny orinasa. Afaka manenona mihoatra ny 100 tapitrisa metatra ingrey entana sy ny Fandokoana mihoatra ny 200 tapitrisa isan-taona lamba.
Tsy manome isan-karazany ny lamba famokarana mba hanomezana izay ilain'ny mpanjifa ny tamin'izany fotoana izany. Ny lehibe indrindra dia fanaovana am-paosy ny famokarana ----- landihazo, T / C, T / R, misy tani-hay, twill, herringbone. Izy ireo dia amidy ao amin'ny tsena anatiny sy aondrana ny mihoatra ny roa-polo sy ny faritra firenena tahaka an'i Etazonia, Hong Kong, Azia Atsimo Atsinanana, Afovoany Atsinanana ary Eoropa.
Foana izahay hamoaka base hevi-baovao eo amin'ny kalitao tsara sy ny manana laza tsara amin'ny mpanjifa.
Ho foana isika maharitra ny politikan'ny "Best Quality, Hanaja Olona Sary nahazoan, tso-po sy amin'ny fo Service Fiaraha-miasa" mba hanome kilasy voalohany fanompoana ho an'ny mpanjifa rehetra. Mandritra izany fotoana izany, ho tohizana hanamafisana ny compétence ao an-toerana sy ny tsena iraisam-pirenena mifototra amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy ny asa fanompoana.
PengTong mitady fatratra fampandrosoana miaraka aminareo amin'ny ho avy.
taratasy fanamarinana kalitao
Isika dia nametraka rafitra tonga lafatra ny fitantanana sy ny famokarana mikoriana, sampan-draharaha-dalam-pandrosoana, mpanampy sampan-draharaha, QC sampan-draharaha, sampan-draharaha bola.
tsy tapaka ny mpanjifa: H & M hantsana ZARA ELAND Levy BASIC NY TRANO Tommy
Indostria sy ny varotra fampidirana
Manana ny ny orinasa, mba hahafahantsika mampihena ny vola lany ary ny tombony hiverina indray ny mpanjifa, Mandra-pahatongan'izany, dia afaka manome asa matihanina.
rehefa avy-fanompoana varotra
Raha misy ny olana rehefa misy toetra saleing, dia manaova fotoana mba hanampiana ny olona manokana rindriny ny olana haingana araka izay azo atao
fiarovana mafy vokatra
Manana mivezivezy isan-karazany looms 400 milentika, dia afaka mpanamboatra 14 tapitrisa metatra ny lamba isan-taona
Ny trano any Tianjin seranan-tsambo sy Qingdao seranan-tsambo, dia afaka manome asa fanompoana ny "fotoana fanaterana haingana indrindra, ny voalohany na lahateny".
Ampiana hoe: RM # 1201, Ximeiwuzhou Plaza, Huaian East Road, Yuhua District, Shijiazhuang, Hebei, Sina
100 Cotton Yarn Dyed Woven Fabric, Tc 65/35 32*32 106*58 Plain Fabric, Yarn Dyed Check Fabrics, Yarn Dyed Brushed Fabric, 100 Cotton Yarn Dyed Chambray Fabric, TC kofehy fanjairana mena mangatrakatraka ny Fabric,